မြန်မာ့အသက်အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ စုဝေးရာ ထူးဆန်းသော အဖွဲ့ကြီး ~ Myanmar Express
ဒုတ်ကောက်ကိုယ်စီ တက်ညီလက်ညီ၊အသက်(၆၀) မပြည့်က မဝင်ရ၊တောင်ဝှးကိုင်ပြီး နိုင်ငံကို ကာကွယ်မယ်၊ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ပြည်သူအားလုံး ပါရမယ် (ဆံပင်ဖြူသူ၊ သွားမရှိသူ၊ ထိပ်ပြောင်သူ၊ မျက်စိမှုန်သူ၊ နားလေးသူ)၊ဗာရာနသီပြည်ကို ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီးရဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းကိုပဲ ထောက်ခံရမယ်၊ဘာမှမပူနဲ့ အဘိုးတို့ရှိတယ်၊၁၂ ကို စိတ်ထဲမှာ မှတ် လက် ၁၀ ချောင်းထောင်၊ဒါတော့ အဘယူလိုက်မယ် ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဘာကို ဝေစုခွဲကြကျယ်ကျယ်ပြော မကြားရဘူး၊မသေခင် ဝန်ကြီးတစ်နေရာလောက်ရရင် ကျေနပ်ပါပြီ၊ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး တကမ္ဘာလုံးကို ကျော်တက်ပြမယ်၊
Posted in: မြန်မာ့အသက်အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ စုဝေးရာ ထူးဆန်းသော အဖွဲ့ကြီး
22 November 2010 00:15
အကယ်၍.အကယ်၍....ဒေါ်စုသည်အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိမ်းခဲ့ရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်မြန်မာပြည်ကိုတကယ်ချစ်ခဲ့ရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်အစ်ကို အရင်းကိုအစ်ကိုကြီး အဖအရာထားရမှန်းသိခဲ့ရင်...အကယ်၍..ဒေါ်စုသည်သကြား နဲ့ ဆားအရောင်တူသော်လည်းအရည်အသွေး မတူပါလား..ဆိုတာကိုခွဲခွဲ ခြားခြား နားလည်ခဲ့ရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်ဘ၀ မမေ့ဘ၀င် မမြင့်ခဲ့ရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်လူမျိုးခြားဘာသာခြားနဲ့အိမ်ထောင် မပြုခဲ့ရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်ိမိဘ မျိုးရိုးအစဉ်အလာကိုသစ္စာ မဖောက်ခဲ့ရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်စောင့်လေ မျိုးနွယ်ဝံသာနုရက္ခိတဗုဒ္ဓအဆုံးအမကိုလိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်...အကယ်၍..ဒေါ်စုသည်ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး ဘ၀မရောက်ခဲ့ရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်အလုံးစုံ ပိတ်ဆို့ ရေးအလုံးစုံ ပျက်သုံးရေးအလုံးစုံ ဆန့် ကျင်ရေးအာဏာဟူသမျှ ဖီဆန်ရေးတပ်မတော်အားထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး ဆို တဲ့အဖျက်လုပ်ရပ်များကိုစွန့် လွှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်....အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်ဆုပေါင်းများစွာကိုစုအကြောင်းတရားပါ..ဆိုပြီးအောက်ခြေမလွတ်ခဲ့ရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်မြန်မာစကား ပြောမြန်မာအစား အစာတွေကို စားမြန်မာ့လေကို ရှူမြန်မာ အ၀တ်အထည်တွေဝတ်ထားသလောက်မြန်မာစိတ်ရှိပြီးမြန်မာအကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်း သိခဲ့ ရင်...အကယ်၍..ဒေါ်စုသည်လူမျိုးခြားဘာသာခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတို့ ရဲ့ ရင်ခွင်ကာမဂုဏ် ယစ်ပလ္လင်မှာဘ၀ကို..အမျိုးကို..အသွေး အသားကို..အစဉ်အလာကောင်းတွေကို..မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို..အဆုံးရှူံး မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်...အကယ်၍..ဒေါ်စုသည်နိုင်ငံတော် အဏာကိုဖြတ်လမ်းက မလိုက်ခဲ့မိရင်....အကယ်၍..ဒေါ်စုသည်မျိုးချစ်တပ်မတော် နဲ့ အတူလက်တွဲ ခဲ့မယ်ဆိုရင်...အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်"ပြည့်အင်အားသည်ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိသည်"ဆိုတာကို သဘောပေါက် နားလည်ခဲ့ရင်...အကယ်၍ ...ဒေါ်စုသည်"ဘေးပြောတာကို မယုံဘဲသွေးပြောတာကို ယုံခဲ့ရင်"ခုတော့ ရွှေမြန်မာပေါင်းတို့ ရေ...သရဖူကိုသာ ဆောင်းကြပေတော့၂၀၁၀ မှာပေါ့..ဒါကြောင့်...ရွှေချစ်ပေမယ့် နေရစ်တော့တစ်ပြည်သူ မရွှေထားဒေါ်စု Aris ရယ်ဗျား ....
26 November 2010 01:20
အဲလို လူတွေက တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခ မပေးခဲ့ ဘူး ။သူ့ ဘ၀ သူ့ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် လုပ်ခဲ့ တဲ့ သူတွေဆိုတာ နားလည်ပါ သူငယ်ချင်း။ မင်းအသက်ကြီးတဲ့ လူတွေ အကြောင်း ဒီလောက်ရေးချင် ပြောချင်နေရင်တပ်မတော်က အသက် ၆၀ ပြည့် လို့ တောင် မနားနိုင် အားမရနိုင် နိုင်ငံကာကွယ်ချင်နေတဲ့ လူတွေကို သွားပြောရေးကွာ..မင်းအဲလိုရေးပြီး မင်းနာမည် မင်းလိပ်စာလေးပါ ပေးလိုက် အဲလိုဆို မင်းကို ငါ နေ့ တိုင် ချီးကျူးလေးစားနေမယ် ..
26 November 2010 05:07
မင်းကိုတိုင်တောင် ဖားနိုင်မှ စောင်းပြီးရေးနိုင်မှ စားနေရတော့ မင်းဘဝကို ငါရင်လေးတယ် ။ အခုငါနေတဲ့နိုင်ငံက ဘာသံရဇာတ မထွက်ဘူး လွတ်လပ်စွာတီထွင်ကြံစပြီး ကြီးပွာလာတာ . အစိုးရက မမွေးခင် ၁ ပတ် အလို မှာထဲက သေထဲ့အထိ ထောက်ပံ့ရေး ဆိုတာရှိတယ် အဲဒါ ဆိုရှယ် ဒီမိုကရေစီ. စစ်အစိုးရ ဒေါ်လာ သန်း ဘီလျံနဲ့ချီ ရတယ် ပြည်သူကို ဘယ်နပြားမှ မပေးတဲ့ အပြင် ငါ့လီး ပေါတာပါ ဆွဲလိုက် သေးတယ် အဲ့ဒါ မင်းသိလား မင်းလိုကောင်ကို ဒီမိုကရေ စီအကြောင်းပြောဖို့ မလို့မင်းဖင်ကို ငါ ပါကင် ဖွင့်ချင်း ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ငါ့လီးနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး ငါရုပ်သီးထောင်းထားတဲ့ ကျီပွေ့နဲ့..လီးပဲ
အဲဒီထဲ နင့်အဘိုးမပါရင်တော့ ပြောပေါ့..။ နင့်အဘိုးပါနေရင်တော့ နင်ကိုယ်တိုင်လည်း အမျိူးကိုကိုင်တုတ်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ရလိမ့်မယ်..။
1 December 2010 02:04
"ဒါတော့ အဘယူလိုက်မယ် ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဘာကို ဝေစုခွဲကြ" ဟုတ်လား.. သေချာမသိဘဲဘာလို့လျှောက်ရေးရတာလဲ...မင်းအမေလင်..စစ်တပ်က ကောင်တွေကိုအရင်သွားပြောလေ။
8 December 2010 07:16
အင်းခုပြောသွားတဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တစ်နိုင်ငံလုံးစာမမေးဘူးနော် ပြောသြွးတဲ့သူတွေရဲ့ ညီအစ်ကို ၂ ၀င်းကွဲ ၃ ကွဲ ရဲ့အကြောင်းကိုတောင် အကုန်သိကြလား ဆွေမျိုးအကြောင်းအကုန်တောင်မပါသေးဘူးနော် အဲဒီအကြောင်းလေးတောင်မသိဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတစွန်းတစ်စကြားရုံးသိရုံးလောက်နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုတော်လှပြီးတ်လှပြီလို့ တော့မထင်ပါနဲ့ ဗျာ ကိုထက်တော်တဲ့တတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိထားပါဦး ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက ပြောကြားသွားတဲ့သူတွေ ကိုယ်အိမ်ထောင်ကိုနိုင်နင်းအောင် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ အမြဲနေရအောင် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေး နေနိုင်အောင်အရင်ကြိုးစားပါအုံး နိုင်ငံတော် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ခိုင်းဖို့မပြောသေးပါဘူး လူတိုင်းမှာကောင်းတာရှိသလိုမကောင်းတာလဲရှိတာပါဘဲ အကုန်လုံးကောင်းတယ်လို့ တော့မပြောပါဘူး ကိုထက်သိလို့ တတ်လို့ လုပ်နေတာကို အဲလိုမျိုးတွေတော့မပြောသင့်ပါဘူး တကယ်လို့ ပြောနေမယ်ဆိုရင်တောင် လပြည့်ညမှာ ခွေးတစ်ကောင်က လသာတာကိုကြည့်ပြီးတော့မကျေနပ်လို့ ဟောင်နေမယ်ဆိုရင်လဲ လကတော့ဒီအတိုင်းသာမြဲပါဘဲ မှေးမှိန်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်တယ်ဗျို့ တပ်မတော် ဆိုတဲ့ လမင်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ သာနေတာ ကြာပြီ... ခွေးတွေကလည်း ဟောင်နေလိုက်တာ အရောင်ပေါင်းဆုံ၊ အမျိုးစားပေါင်းဆုံပဲ... ဒါပေမယ့် ခုထိ လမင်းကြီးက သာမြဲသာနေတာပဲဗျာ.......
13 December 2010 06:15
ငါလိုးမစောက်ရူး။ ကိုယ်မေကိုယ်လိုး။ တိုင်းပြည်မှာ အသက်ငယ်ပြီးခိုးစားနေတဲ့မင်းအမေမင်းလိုးနေတဲ့ကလူတွေသွားပြောဟ ငနွားရ။ ငါလိုးမသား။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေတဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့တော်တော်ဒေါသထွက်တယ်။ မအေလိုး မင်းကမင်းပထွေးကျွေးထားတဲ့ ဟာစားနေရလို့။ ဒီလောက်ရေးနိုင်တာ။ တိုင်းပြည်မှာမင်းတို့လိုလူတွေရှိတာတိုင်းပြည်နာတယ်။
5 January 2011 23:15
အော် အနာပေါ်တုတ်ကြတော့နာတတ်လိုက်ထာဗျာ ဆဲလိုကြီးနေတာပါလား ဆဲတာတစ်ခုဘဲသင်ပေးလိုက်ထာလားဗျာ အမိရုတ်တော့နှုတ်ကြမ်း အဖရုတ်တော့စရိုက်ကြမ်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုးဆိုရင်အဲစကားကြားဘူးမှာပေါ့နော် မည်သူ့ ကိုမှမရည်ရွယ်ပါ တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ
21 January 2011 17:31
ဗမာပီပီဗမာ့သွေးကို ဒီလိုနေရာ လူတိုင်းဖတ်နေတဲ့ ဘလော့ဒ် တွေမှာဆဲပြနေတာတော့ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ သူတို့တွေ ဘာကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့အထိ ပြည်သူလူထုတွေဖက်ရပ်တည်ပြီး နေရတယ်ဆိုတာလေ့လာပါအုံး။ တပ်အတော်မှာ အသက် ၆၀ ဆို ပင်စင်ပေးပြီလေ။ ဘာအကြောင်းကြောင့် ဦးသန်းရွှေက အနားမယူသေးတာလဲ။ လူတစ်ရာမှာ ဆယ်ယောက်လောက် စစ်အာဏာရှုင်တွေ၇ဲ့ လုပ်ရပ်ကို လက်ခံသလားဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်ပါအုံး။
21 January 2011 23:05
လောလောဆယ်တော့ ဦးသန်းရွှေက ဒီလူတွေထက် အသုံးကျပါသေးတယ်။ ဒီလူတွေကတော့ တကယ့် လူပိုကြီးတွေပါပဲ...။စောက်သုံးက မကျတဲ့ အပြင် အတင်းကျ ချသေး။
if ur step-fathers dont kill to public..if ur step-fathers look care to public...if ur step-fathers have brain and knowledge..if ur step-fathers clever...if ur step-fathers have shame..if ur step-fathers have good habbits..if ur step-fathers not like animal's habbits..if ur step-fathers save people...if ur step-fathers dont lie..if ur step-fathers work hard..if ur step-fathers give human right to public..if ur step-father will stand at public side..use ur brain n think ...
ထူးဆန်းသော အတိုက်အခံများ (၄)
ငါးမင်းဆွေကြောင့် ငါးပါးမှောက် ရတဲ့ ဒေါ်စု နှင့် NL...
သတင်းထူး ကဏ္ဍ - ၁
ကဲ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေချန်ထားခဲ့ကြမှာလဲ
မြန်မာ့အသက်အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ စုဝေးရာ ထူးဆန်းေ...
အမေရိကရောက် မြန်မာတွေ ပြန်လာကြဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖိတ်ခေါ်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို မေလ ၁၈ ရက်နေ့ သောကြာနေ့မှာ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ခရီးရောက်မဆိုက်မှာပဲ မြန်မာလူမျိုး တွေ အမိမြေကို ပြန်လာပြီ...
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ထ်ိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယ သ မ္မတဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌...